Shiinaha ZrO2 Kubadaha dhoobada Soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Kangda
Habka wax soo saarka: cadaadiska isostatic, cadaadiska hawada oo qulqulaya;
Cufnaanta: 6.0g / cm3;
Midabka: cad, caano caano, jaalle caano;
ZrO2 dhoobada kuul leeyihiin wareegsan guud ahaan wanaagsan, dusha sare oo siman, adkaansho aad u fiican, xirtaan iska caabin iyo caabbinta saamaynta, mana jebin doono inta lagu jiro hawlgalka xawaaraha sare leh; isku dheelitirka khilaaf aad u yar ayaa ka dhigaya kuullada zirconium inay aad u hooseeyaan xirashada. Cufnaanta ayaa ka sarreysa warbaahinta kale ee shiida dhoobada, taas oo kordhin karta nuxurka adag ee maaddada ama kordhin karta qulqulka maaddada.
Kubadda dhoobada ee loo yaqaan 'zirconia dhoramada' waxay u adkeysataa heerkulka sare waxayna si xasilooni leh ugu shaqeyn kartaa jawiga heerkulka sare ee ka hooseeya 1000 darajo Celsius iyadoo wax yar laga beddelayo mugga. Waxay leedahay waxqabad heerkul gariir sareeya, heerkulkul gariirkuna waa 200-260 digrii.
Goobta arjiga: Inta badan waxaa loo isticmaalaa in lagu shiidiyo ultrafine-ka iyo kala firdhinta isku-dheellitirnaanta sare iyo walxaha adag ee ka hooseeya deegaanka ee u baahan nadiifnimo iyo wasakhda eber;
Marka la barbardhigo kubbadaha birta ah, faa'iidooyinka ugu waaweyn ee kubbadaha dhoobada ayaa ah:
(1) Waxay 59% ka fududdahay kubbadaha birta ah, taas oo yaraysa awoodda sanduuqa, rogista iyo xoqitaanka waddada marka culaysku xawaare sare ku socdo;
(2) Qeybta dabacsanaanta ayaa 44% ka weyn tan birta, taas oo macnaheedu yahay in xaddiga cilladaha ay aad uga yar tahay tan kubbadaha birta markii lagu qasbay;
(3) Adaggu wuxuu ka sareeyaa birta, HRC waxay gaaraysaa 78;
(4) Iswaafajinta khilaafku waa yar yahay, ma-magnetic, koronto ahaan waa la dahaaran yahay, waana ka adkeysi badan yahay daxalka kiimikada marka loo eego birta;
(5) Isku dheelitirka balaarinta kuleylka waa 1/4 ee kan birta ah, kaas oo adkeysan kara isbeddelada heerkulka lama filaanka ah;
(6) Dhamaadka dusha sare ayaa ka fiican, Ra wuxuu gaari karaa 4-6 nanometer;
(7) U adkaysiga heerkulka sare, kubbadda dhoobada ayaa wali leh xoog iyo adkaansho 1050 darajo Celsius;
(8) Ma daxiri doonto oo waxay ku shaqeyn kartaa shuruudo ku saabsan saliid la’aanta saliidda.
Hore: Si3N4 kubbadaha dhoobada ah
Xiga: Kubadaha la qoday / kubbadaha dunta / Kubbadaha feedhka / Kubbadaha la taabto
Kubadaha dhoobada G10 Zro2
Kubadaha dhoobada ee Zro2
Kubadaha dhoobada Zro2 G10